घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू आइवरी कोस्ट फुटबल खेलाडीहरू एरिक बेलिली बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण स्टोरी को एक डिफेंडर प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जानिन्छ "जनावर"। हाम्रो एरिक ब्लीली बचपन स्टोरी प्लस जीवनी तथ्यहरूले तपाईंको बचपनको समयको लागि उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक रक्षात्मक बेड्रोक हो। तथापि, केवल केहि नै एरिक बेललीको बियो विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब अगाडी बढो बिना, सुरु गरौं।
एरिक बेलिली बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम एरिक बर्ट्रन्ड बैमेल हो। एरिक बैलीको रूपमा उनी प्रायः भनिन्छ, उनीहरूका आमाबाबुलाई अप्रिल 12 को 1994th मा जन्मिएको थियो; श्री र श्रीविल बैली (तल चित्रित) Bingerville, कोट डी आइवर मा।
एरिक बल्ली आफ्नो परिवारसँग हुर्के आमाबाबु, बङ्गर्वियाको गृहनगर Bingerville मा भाइबहिनीहरू Didier Drogba। दिनको समय देखि Didier Drogbaबिंगरभिले एक अर्ब बिरोध भएको थियो जहाँ उनीहरूको खुट्टामा फुटबल हुँदा साना केटाहरुका लागि खालीपन अन्त्य हुन्छ। एक जवान एरिक बैलीलाई छोडिएको थिएन।
आदर्श रूप मा, एरिक बली प्राथमिक स्कूल मा जब7को उमेर मा प्रतिस्पर्धी फुटबल खेलना शुरू गर्यो। आफ्नो प्राथमिक शिक्षा पछि (आफ्नो किशोरी वर्षको दौडान), तिनी एब्रिजानको इभरीय तटको आर्थिक राजधानीको एक टेलिफोन बक्सको प्रबन्धक बने।
व्यापारको नजिक प्रत्येक दिन, बेमेलले आफ्ना नियोक्ताहरूले भरिएको व्यक्तिले आफ्नो फोनमा परिवर्तन (पैसा) खाली गर्नेछ। एक चोटि एक पटक सम्झियो;
"अफ्रिकामा, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू धेरै कठिन परिस्थितिमा बाँचिरहेका छन् तर, हाँ, बच्चाको रूपमा मैले काम गर्न थाले,"
बेमेलले अन्य आशाका साथ परीक्षणको लागि अघि प्रक्रियामा धेरै सानो पैसा कमाए अनुसार उसले एक पेशेवर फुटबलर बन्ने सपना देखाए। बेल्लीले आफ्नो टेलिफोन नौकरी छोडेपछि स्थानीय फुटबल अनुगमनको खोजीमा। आफ्नो आमाबाबुलाई पालन गर्दै, उनको फोन कल व्यापारको लागि धन्यवाद, उनको मात्र प्रेमिका उनको प्रेमिका माध्यमबाट, Vanessa Troupah मार्फत थियो। उनको प्रेम कथा विवरण विवरण एरिक बेलिली सम्बन्ध सम्बन्धी लाइफ सेक्सनमा पाइन्छ।
एरिक बेलिली बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - प्ले गर्दै
धेरै अन्य बच्चाहरु जस्तै Bingerville, कोट डी आइवर, बीएलीले वास्तवमा माथि बन्ने सपना देख्यो Didier Drogba। तथापि, एक स्ट्राइकर बनने योजना असफल भयो जस्तो कि त्यो उनको लागि एक प्राकृतिक कुरा थिएन। बेमेलले आफ्नो भविष्यलाई कुनै पनि प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्न को लागी सुरक्षाको क्षेत्रमा रहेको थियो भन्ने कुरालाई महसुस गरे जुन तिनलाई पासित गर्दछ। उनले तुरुन्तै अध्ययन गर्न छोड्यो Didier Drogba लाई सर्जियो रामोस जसलाई उनले पछि आफ्नो मूर्ति मान्दछन्।
बलात्कार गर्दा उनीहरूको मध्य-किशोरीले वर्षौंको स्थानीय टोपफ्लाइट खेल्न थाल्दै आशा गरे कि उनी युरोपको कुनै पनि विचार बिना सभ्य जीवन बिताउँथे। त्यसपछि त्यसोभए, उनले धेरै दलहरूसँग प्रशिक्षण दिए, शहरको एक जिल्लाबाट एउटा अनुगमनको खोजीमा हिँड्ने।
एरिक बेलिली बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
वर्ष 2011 बेलको लागि एक चमत्कारपूर्ण एक थियो जसले बर्किना फासोमा एक युवा टूर्नामेंटमा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल खेल्ने मौका पाए। युवा टूर्नामेंटमा, एस्पनीनील स्काउट्सले उनलाई अफगानिस्तानबाट जवान बगालको बचाव हेर्न खोजे।
बैलिली जुन केवल 17 वर्ष पुरानो थियो उनको समयमा उनीहरूको अपेक्षाहरु भेटिए। उनी चाँडै बार्सिलोनामा आरसीडी एस्पेन्यालिलमा लागेका थिए जहाँ उनी आफ्नो युवा प्रणालीमा गए। काम अनुमति प्राप्त गर्न विलम्बले बेमेललाई 10 महिनाको लागि प्रतीक्षा गर्नुभन्दा पहिले Segunda डिभिजनमा आफ्नो एस्पेन्यालीको बी-टोलीको लागि प्ले गर्न अनुमति दिइयो।
उनको कडा काम र समर्पणको लागि धन्यवाद, बेललीको प्रतिभा बढ्दै गर्दा उनी सबै भन्दा कम संरक्षकलाई सम्मानित गरिन् जसले स्पेनको शीर्ष चार क्लबमा नियमित केन्द्रीय रक्षकहरूको तुलनामा अतीत भन्दा कम छुट्यो।
बेललीको प्रभावशाली सुरुवातले उनको मूर्तिको मनलाई धकेल्छ सर्जियो रामोस, डिएगो Godin र Gerard Pique। त्यो कुनै समय अघि कुनै समय लागेन ला लीगा लिन्चिन र एक रक्षात्मक समस्या लिओनेल मेस्सी.
एस्पिनील्यान्ड मा उनको समय को समयमा, एरिक बेलिली को कुरा को कुरा हो डर्बी बार्सिलोना,aएफसी बार्सिलोना र आरसीडी स्पेनील को बीच फुटबल म्याच को नाम दिए। Espanyol संग5मिल्दो पछि मात्र, बेमेल ले Villarreal द्वारा किनिएको थियो। यो क्लब मा थियो यो थियो द्वारा थियो विशेष एक, जोस Mourinho जो संयुक्त लागि प्रबन्धक बन्नुभयो।
8 जून 2016 मा, बेसेली जोसे Mourinho द्वारा हस्ताक्षरित पहिलो खेलाडी बने। क्लबमा सामेल हुनदेखि, उनी प्रभावित भए।
एरिक बेलिली बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
सम्बन्धमा हुनुको कारण सधैँ एरिक बेललीको जीवनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। Vanessa Troupah (तल चित्रित) आफ्नो जीवनको प्रेम हो त्यो दिनको आर्थिक रूपमा अक्षम थियो।
जून 2016 मा एरिक बेलीले लामो समय सम्मको प्रेमिका वेनिसा टापुलाई विवाह गरेपछि, आफ्नो एक्स-सालको सौदा पूरै पुरानो ट्रेफर्डको लागी £ 30 लाखको सौदा पूरा गरेपछि।
विवाहको शान्त र कम-महत्वपूर्ण प्रकृतिको बावजूद, धेरै उत्सुक स्थानीय पत्रकारहरू सक्षम थिए कि बेलीको भाग्यशाली दुलहीको लुगा पहिचान र सामाजिक स्थिति।
उनको मात्र मामिला जानकारी थियो कि व्यानेसा एक पटक एक सडकमा मोबाइल फोन किओस्क भागेपछि उनको प्रेमी बेललीले स्थानीय फुटबल अनुबंधको सामना गरे। उनीहरूको विवाहको तुरुन्तै, त्यहाँ गफहरू अवस्थित भएका छन् जुन निम्न शब्दहरू देखा पर्छन्;
पृथ्वीमा के भन्नाले अंग्रेजी प्रिमियर लिगलाई व्यावसायिक आईभोरियन केटीलाई लिङ्क गर्न सक्छ जसले हरेक दिन $3कम से कम आफ्नो फोन व्यवसायबाट बनायो?
प्रतिक्रियामा, वैनेसाले साधारण टिप्पणी गरे, यसो गर्दा उनीहरूले कुरा गर्दा कुरा गर्थे। श्रीमती बेलीले पछि खोल्यो र बेलीले उनको सम्बन्धको बारेमा थप हृदय-सम्बन्धी रहस्यहरू प्रकट गर्यो। उनले भनिन्;
"मैले एरिकलाई भेटें जब म अबिदजानमा सडकमा मोबाइल फोन कीओस्क दौडिरहेको थिएँ"
उनले सुरु गरे।
"हामी विमान, एक बार वा उत्सवमा भेट्ट्यौं। उनले मलाई मेरो कीओस्कमा बिस्किट्ससँग भेट्टाए पनि म त्यहाँ बेच्दै थिएँ। उहाँ कुनै पनि थिएन। उनले क्रेडिटमा मेरो केओस्कमा कलहरू प्रयोग गर्थे।
"आज उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलर र एक पेशेवर हो। म तपाईंको भावी पतिसँग भेट्न मोबाइल फोन किओस्क चलाउन म भन्दै छैनु। म केवल जवान केटीहरु लाई केहि गर्न को लागी, कडा मेहनत गर्न को लागी, आफ्नो मान्छे को जीवन मा सफल हुन को लागि सल्लाह दिन को लागि समर्थन दिन को लागी चाहते हो। "
यी समयमा, वैनेसाले आफ्नो मान्छेको लागि रसदको हेरचाह गरे जब उनको कुनै पैसा छैन। उनले प्रशिक्षण सत्रबाट एरिक बैलीको ट्राभल टावर चलाए। तिमी धेरै छैन तर उनी सानो सानो बलि चढाउनु पर्छ किनभने उनी उहाँलाई धेरै माया गर्थे र उसलाई सफल हुन चाहन्थे।
लेखन को समयमा, जोडे संग एक छोरा हो र मार्च6को रूप मा, 2017, Bailly को पत्नी वैनेसा गर्भवती थियो।
एरिक बेलिली बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -अस्थायी जीवन
एरिक बेलिलीलाई कम-स्वभाविक भनेर चिनिन्छ, तर हामीले मान्दछौं Jose Mourinho जसलाई कसैले कसैलाई साइन इन गर्दैन कि त्यो ह्यान्डल गर्न सक्दैन। तल खेल को पिच मा यस्तो छोटो स्वभाव को प्रकृति को एक झलक छ।
एरिक बेलिली बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उनको जुत्ताको बारेमा
एरिक बेलिलीसँग उनको डरलाग्दो फुटवलको लागि एक पुरानो रमाइलो व्यक्तित्व छ (तल चित्रित) जसले ड्रेसिंग रूममा लुगा लगाउँदछ। थियो जुआन मटा र एशले जवान त्यो संसारलाई उनीहरूको जुत्ताको बारेमा जान्न को लागी तिनीहरूले Instagram मा पोस्ट गरे।
एशले जवान जो शो को मालिक को जानन को अस्वीकार गरे उनको फैसला को अपमानजनक ड्रेसिंग रूम छत मा लटकाने को फैसला गरे।
यो हप्ता अघि एरिक बेलिलीको सेतोसँग के थियो? एशले जवानले व्याख्या गर्न सबै भन्दा राम्रो प्रयास गर्दछ ... # MUFC https://t.co/h201W6Eeoy
- मैनचेस्टर यूनाइटेड (@ManUtd) अक्टोबर 20, 2016
Fअधिनियम जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो एरिक ब्लीली बचपन स्टोरी प्लस अनलोग जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
ईम्यानुएल मार्च 28, 2019 मा 7: 34 अपराह्न
मैले मेरो छालाको रङमा फुटबललाई सलाम गर्छु